Weriyayaasha BBC-da oo go’aansaday in ay sameeyaan shaqo joojin – SBC
Weriyayaasha BBC-da oo go’aansaday in ay sameeyaan shaqo joojin
Weriyaasha ka howlgala idaacadda BBC-da ayaa u codeeyey in la sameeyo shaqo joojin si cabasho looga muujiyo qorshaha BBC-da ee ku aadan in 387 weriye shaqadooda ay wayn doonaan gaar ahaan BBC-da qeybteeda dibadaha la hadasho.
BBC-da ayaa gaarsiisay shaqaalaheeda in ay go’aansatay in albaabada la isugu dhufto adeegyada caalamiga ee luqadaha ajnabiga ee tiradoodu gaarayso 32 adeeg.
Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qaadatay go’aan ay ku dhimayso deeqda la siiyo BBC-da 16%, kadib markii ay xukuumadda Britain ay sheegtay in BBC-da ay qaadi doonto mas’uuliyadda dhaqaalaha ku baxo sanadda 2014, halkii ay wasaarada arrimaha dibadda ka bixin lahayd dhaqaalahaas.
Dhanka kale madaxa wararka BBC-da haweenayda lagu magcaabo Hayliin Boodhiin ayaa u dirtay email shaqaalaha BBC-da iyadoo ku sheegaysa in ay sameesay wax kasta oo awooddeeda ah si ay u yarayso tirada wareyaasha BBC-da ka kaaftoomayso balse ay qasab noqotay in ay iska fasaxdo BBC-da 387 shaqaalaheeda maadaama la xiray qaar kamid ah adeegyadeeda dibadda.
BBC-da ayaa adeegyadeeda caalamiga ah bilowday sanaddii 1932, waxaana lagu qiyaasaa hantida ku baxda BBC-da 275malyan oo lacagta isterliniga ah oo u dhiganta 435 oo malyan oo dollar sanadkiiba, waxaana la socda qeybaheeda kala duwan raadiyaha, Internet-ka iyo TVga 241 malyan oo qof.